Taliska qaybta bilayska Hiiraan oo ku gudo jira qorshe dib loogu furayo xabsiga weyn ee Baladweyne – Radio Daljir
Febraayo 21, 2013 7:00 b 0
Baladweyne, Feb 21- Taliska qaybta booliska gobolka Hiiraan ayaa sheegay inuu ku gudo jiro qorshayaal la doonayo in dib loogu furo xabsiga weyn ee magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Saraakiisha ammaanka ee Baladweyne ayaa dhawrkii bilood ee la soo dhaafay waxay wadeen dadaalo ku aadan sidii dawladda Federaalka ee Soomaaliya ay dib ugu furi lahayd xarumaha hay’adaha dawladda ee aan wali la furin maadaamaa xiligan dawladdu ay ka hawlgashay magaaladaasi.
Taliyaha Saldhiga? Beladwayne? ee dawlada Federaalka Soomaaliya oo maanta waraysiiyey radio daljir ayaa kawarbixiyey xaalada maaxaabiista ku xiran saldhiga magaaladaasi, wuxuuna sheegay maxaabiistu inay batteen ayna wanaagsanaan lahayd in xabsiga weyn dib loo hawl galiyo.
taliyaha ayaa sheegay in ay xabsigaasi ay ku hayaan maxaabiis danbiyo kala duwan lagu soo xiray waxaana uu sheegay in xaaladooda ay ad u wanaagsantahay.